Queen For Seven Days ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
1.6.2017 မှစတင်​ထုတ်​လွှင့်​ခဲ့ပြီး ongoing ကား​လေးဖြစ်​ပါတယ်​ ….
Main Cast တွေကတော့ Yeon Woo Jin , Lee Dong Gun & Park Min Young ( ကင်နာနာ ) တို့ ပါဝင်ထားပါတယ် …
Supporting Role အနေနဲ့ Jang Hyun Sung , Son Eun Seo & Yoo Min Kyu တို့ က ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ် ….
ဇာတ်​လမ်း​လေးက​တော့ သူ့အစ်​ကို​တော်​ရဲ့အထင်​လွဲမှု​တွေကိုခံ​နေ​ရတယ့်​ မင်းသားဂျင်​ဆွန်း …
​ချောင်​ကျတဲ့​တောရွာ​လေးထဲမှာ ဖွက်​ထားခံရတယ့်​ သခင်​မ​လေး​ချေ​ဂျောင်း …
ပြီး​တော့ မင်းသားဂျင်​ဆွန်း ရဲ့အစ်​ကို​တော်​ ဂျိုဆွန်းမင်းကြီး သူတို့ ကြားကနန်းတွင်းအရှုပ်​အ​ထွေး​တွေကိုရိုက်​ပြထားတာပါ ….
​ချေ​ဂျောင်း နှင့်​ ဂျင်​ဆွန်း က​ရောဘယ်​လို​တွေ့ကြမလဲ မင်းကြီးက​ရော ဘာ​ကြောင့်​အထင်လွဲနေတာလဲ … ?
ပြီး​တော့ Queen for Seven Days ဆိုတဲ့အတိုင်း ​ချေ​ဂျောင်းကဘုရင်​မဖြစ်​မှာလား … ?
ဘုရင်​မဖြစ်​သွားခဲ့ရင်​လည်း ဘာ​ကြောင့်​နန်းသက်​က ၇ရက်​ပဲရှိတာလဲ ? ဆိုတာ ဒီကား​လေးမှာကြည့်​ရှုခံစားလို့ရပါပြီ …
Rating အရကတော့ MyDramaList မှာ 8.3/10 နှင့် Viki မှာ 9.7/10 အသီးသီးရရှိထားတဲ့ Rating မြင့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါ ….
Translator : Sandar Lwin & HKH
Starring: Do Ji-won, Hwang Chan-sung, Jang Hyun-sung, Kang Ki-Young, Kang Shin-il, Ko Bo-Gyeol, Lee Dong-gun, Park Min-young, Park Won-sang, Son Eun-seo, Song Ji-In, Yeon Woo-jin, Yoo Min-kyu,
Trailer: Queen For Seven Days ( 2017 )